Fitaraindrainam-poana sa vavaka an-kitsim-po?
"Niantso an’i Jehovah tamin’ny fahoriako aho, ka dia namaly ahy Izy…Raha reraka tato anatiko ny fanahiko, dia nahatsiaro an’i Jehovah aho." Jona 2:3,8
"Tsara Jehovah amin’izay manantena Azy, dia amin’ny olona izay mitady Azy." Fitomaniana 3:25
Ny boky iray ao amin’ny Baiboly dia nomena anarana hoe: “Fitomaniana”. Izany fitomaniana izany nefa dia tsy fitaraindrainam-poana. Amin-dranomaso no anambaran’ilay mpaminany ny fahoriany, tsy hoe hitaraindraina, fa hivavaka amin’Ilay Andriamaniny noho ireo fahoriana tena misy, sy lalina, manjo ny fireneny.
Hafa noho izany matetika ny fitarainantsika! Saika mampitaraina antsika avokoa ny zava-drehetra, indrindra moa ny olon-kafa. Mampijaly tena isika ary mampijaly ny manodidina antsika.
Ao amin’ny Baiboly, ny fitomaniana dia tsy fanakianana fa vavaka. Fitarainan’ny mpino mandalo fahoriana lehibe ary mangataka ny fiombonam-pon’Andriamanitra sy ny fanampiany. Toy izany no nivavahana mpino, toa an’i Joba, Hezekia, Jeremia, Jona… Nitomany izy ireo ary nanambara tamin’Andriamanitra izay tsy azony nolazaina tamin’olon-kafa. Ny “fitomaniany” dia tsy fiaretana na fikombonana, fa fisehoan’ny finoany manoloana toe-javatra sarotra dia sarotra, tsy takatry ny sainy.
Koa aoka àry isika hianatra hanova ny fitaraindrainam-poana ho vavaka an-kitsim-po, na dia ambara amina “fitomaniana” sy fitalahoana aza izany. Ao anaty fahoriana, aoka tsy hanampatra tsikera na fahatezerana, fa hanaiky hidiran’ny Tenin’Andriamanitra, teny velona. Amin’izay “ny fiadanan’Andriamanitra, izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra”, hiaro ny fontsika sy ny hevitsika ao amin’i Kristy Jesosy (Filipiana 4:7).